Ukuqinisa Umuzi – iAfrika
Nina beSilo njengabantu abaphila isintu siyazi ukuthi ilanga liyaphuma liqhakaze liveze ubuhle bukaZulu, liphinde lishone lize nobumnyama obuveza abamnyama ezinhliziyweni kanye nangezenzo zabo. Imizi emakhaya sikhule iqiniswa, iqiniselwa izinto ezimbi ezingenzeka ukuthi zingenzeki izinto ezifana nokungena kwezulu ekhaya lenze umonakalo, abakhunkuli njalonjalo. Kulengosi sithi ake sithi qephuqephu ngezinto ezigcina sezibulala imizi yobaba mkhulu, ngoba phela ezinye izinto zithi zizinhle zidelile bese kuba khona abafaka unyalwo lwedada ngenxa yokuba nezinhliziyo ezingaphandle nezimbi. Ububi ke ekhaya abungeni ngabakhunkulayo kuphela kepha zikhona nezinye izinto ezincane okuthi uma kunganakiwe zishaye ziphephethe ekhaya kusale kukhala ibhungane, ukufa kuqothe wonke umuntu ekhaya.
Izinto eziyingozi egcekeni ekhaya
Kukhona izihlahla eziyingozi okungamele nhlobo zingene egcekeni ngoba zidala umonakalo wangampela. Kanti ke akugcini ngazo izihlahla ezigcina zenziwe amakhambi obubi ukuthi kufe imizi kade iphilile, kukhona nezilwane eziyingozi ezibulala umuzi zona ke akudingi nokuthi zithakwe nalutho ezinye zazo.
Kunesilwane esincane esibizwa ngokuthi Imvukuzane, kuthiwa imvukuzane nje ngoba phela lapho ehamba khona iyavukuza. Lesi silwane sidla imisundu ngaphansi kwenhlabathi kanti sicishe sifane negundwanyana kepha sona sihlala ngaphansi emhlabathini. Imvukuzane lena ngenye yezilwane eziyingozi uma zike zangena ekhaya zamba imigodi khona ngoba lokho kubika isifo ekhaya, kusuke kufana nokuthi imba ithuna egcekeni. Ngamanye amazwi lesi silwane akumele nhlobo simbe egcekeni, uma simbile usokhaya wakulowo muzi kuyamuphoqa ukuthi aye esangomeni noma ezinyangeni khona zizokwazi ukuqinisa umuzi wakhe ngoba phela isikhathi esiningi imvukuzane isilwane esithunywayo abakhunkulayo ukuthi siyokwenza umonakalo. Ukungena kwaso egcekeni kusho ukuthi kunesandla sesithathu esifaka umoya omubi ekhaya.
Izilwane nezihlala okungamele zingene ekhaya
Akugcini ke ngemvukuzane ukuthi kube khona izilwane ezaziwa ngokubulala izibaya zamadoda. Zikhona nezinye izilwane ezifana nenyoka ebizwa ngokuthi eyabathakathi, kube nenyoni isikhova naso esiyingozi ngoba uma sike sakhala phezu komuzi noma sangena khona ngaphakathi lokho kusho ukuthi kukhona okusina kuwujeqeza lowomkhaya kukhona okuza kunyelela impela kubo. Kanti njalo nazo izicubu zengwenya ezifana nesivalo sayo kanye nenhliziyo yayo ingwenya ziwubuthi obunzima impela nje. Kuthiwa uma udliswe ngesivalo sengwenya noma ufakelwe inhliziyo yayo ekumayeni awudabuli impela nje indlela isuke isibheke kwabheka abezayo kuyo. Yebo khona asiyi nganxanye njengamanzi kodwa ke kuyamangaza ukuthi kukhona abantu ngampela abaphilela ukuhlalisa abanye abantu lubhojozi. Izihlahla nezilwane kuyahambisana isikhathi esiningi ngoba phela okunye kuphila ngokunye. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi kukhona nezihlahla ezinobungozi, esingabala kuso isihlahla esifana neDungamuzi. Igama elithi iDungamuzi alisuselwa nje emoyeni kepha ingoba kuyaziwa ukuthi lesihlahla siwudunga ngampela umuzi wendoda uma nje sike sangena ekhaya. Idungamuzi kuyaziwa ukuthi akumele nhlobo lingene ekhaya. Ingakho ngisho izintombi noma omama beya kotheza abalenzi nhlobo iphutha lokuthuka sebetheza isihlahla sedungamuzi ngoba kuyaziwa ukuthi sishiya kumapeketwane ekhaya konke kubheke phezulu.
Indlela okuqiniswa ngayo umuzi
Ukuqiniswa komuzike kwenziwa izangoma nezinyanga noma abathandazi ke esikhathi samanje ngoba bakhona nabo abathandazi abasebenzisa amakhambi esintu. Kanti ke zikhona nezihlahla ezisetshenziswa uma kuqiniswa umuzi ezingadingi ukwenziwa amakhambi. Lapha sikhuluma ngezihlahla ezifana noMathithibala, Isigqiki somkhovu kanye nezinye njalonjalo. Uma kukhona okuvelile ekhaya okusoleka engathi kunesandla sesithathu phakathi yinto yakhona ukuthi umnumnzane womuzi noma umama wekhaya avuke abhukule ayothola ukuthi inkinga umsuka wayo ukuphi kanti ke futhi ingalungiseka kanjani yini engaba isisombululo kuyo. Ilapho ke othola khona ukuthi sekuqiniswa umuzi ukuthi kungangeni imimoya emibi. Nakho ukuqinisa umuzi kuhlukene ngokwenziwa kwakho, kukhona abaqinisa ngokuthi bacuphe ukuthi uma kukhona okuthi nkente zikhale kuyena umthakathi lo obezothakatha. Lokho kusho ukuthi izinto ezimbi zibuyele kuyena umthakathi isikhuni sibuye nomkhwezeli. Kanti ke okunye kuba ukuthi kuqiniswe ngokuthi imimoya emibi ingangeni nhlobo ekhaya.
Tags Idungamuzi, Izimvukuzane, Ukuqinisa Umuzi
2 thoughts on “Ukuqinisa Umuzi”
26/10/2021 at 19:15